Ungayikhetha kanjani ingxube yokuzilayisha, khumbula lawa maphuzu amane
1, Lungisa imingcele yezobuchwepheshe ye-self feed mixer, isibonelo, singabheka ukuthi yiziphi izinjini zezimoto ezikhethiwe, ivolumu ingakanani, nokuthi iziphi izigaba ezisebenzayo. 2, Kahle idumela nomkhiqizi yokudla okuzenzakalelayo mixer ukhonkolo, bese ukhetha ezinye ...
Ukwethulwa kweloli lokuxuba ukhonkolo
Iloli le-SITC elizilayisha ngokhonkolo lihlukaniswe ngezinhlobo ezimbili: iloli langaphambili langaphambili neloli elingaphambili lamawele elihamba ngokhonkolo wokuxuba ukhonkolo. Ngenxa yokuhamba kwayo okulula nokusheshayo nokusebenza okulula, ihlanganisa ukuxuba nokuxuba. Isetshenziswa kabanzi emalokishini okwakhiwa kwamakhaya kanye nasehousi ...
I-Simply (Weifang) International Trade Co., Ltd (SITC) iyinkampani yeqembu egxile kakhulu ekuhwebeni okungenisa nokuthekelisa. I-SITC yasungulwa ngokuhlanganyela ngabakhiqizi abaningi bemishini yobunjiniyela. Imikhiqizo yayo ifaka ama-Skid steer loaders, ama-Loader amancane, i-Backhoe Loader, i-Excavators, i-Road rollers, i-Mixers, i-Mixer t ...